Maxay yihiin taxadarka loogu talagalay xidhashada Maska Maska | Pantex
1. Xiro maaskaro inta lagu guda jiro xilliga hargabka sare, maalmaha qiiqa iyo boodhka, marka aad xannuunsato ama aad aadid isbitaalka si aad u hesho daweyn caafimaad. Xilliga jiilaalka, dadka da'da ah ee difaaca liito, dadka jiran ayaa sifiican u xirto maaskaro markay baxayaan.
2. Inta badan maaskaro midabbada leh ayaa laga sameeyay dhogorta kiimikada, oo leh hawada oo liidata iyo kicinta kiimikada, taas oo ay fududahay in la waxyeeleeyo mareenka neef-mareenka. Maaskaro aqoon u leh ayaa ka samaysan faashad iyo maro aan laga tolan.
3. Caqiido ma aha in gadaal loo dhigo ka dib marka la isticmaalo oo la nadiifiyo waqtiga. Ka dib markii aad xirato maaskaro muddo 4 saacadood ah, jeermisyo badan ayaa soo urursan doona masarkana waa in la maydhaa maalin kasta.
4. Ha xirin maaskaro si aad u maamusho, sababta oo ah jimicsiga banaanka ah ee loo baahan yahay oksijiinka ayaa ka weyn kan caadiga ah, oo maaskaarku wuxuu horseedi karaa neefsashada oo xumaata iyo xitaa oksijiin la'aanta viscera, ka dibna wuxuu soo saaraa cawaaqib xumo aad u daran.
5. Markaad xidhatid maaskaro, afka, sanka iyo inta badan aagga ka hooseeya orbit-ka waa in la daboolaa. Afka daboolka maaskaro waa inuu u dhawaadaa wajiga, laakiin ma aha inuu saameeyo khadka aragtida.